You searched for Zimbabwean - International News Services
Home / Search results for: Zimbabwean
10 results out of 24 results found for 'Zimbabwean'.
MUGABE’S DOWNFALL IS GOOD NEWS FOR BURGEONING TOBACCO SECTOR
…people out of a population of about 16 million still depend on the tobacco industry for their livelihoods, with the sector retaining its strategic position in the Zimbabwean economy despite…
…have not been reflected in its export figures from 2007, although these were already at a low ebb following the seizure of many commercial farms in the early 2000s. Zimbabwean…
STRONG ZIMBABWE LEAF EXPORT LEVELS BUT UNLIKELY TO SOLVE COUNTRY’S ECONOMIC CRISIS ALONE
…farmers constitute the bulk of registered farmers, at 38,864, followed by categories of farmers who took over largely previously white-Zimbabwean-owned land (called ‘A1’ and ‘A2’ farmers) at 31,621 and 6,312,…
AFRICA STARTS TO ADOPT PUBLIC ACCOUNTING STANDARDS – BUT THE JOB WILL NOT BE EASY
…to IPSAS accrual systems. The Botswana government has committed itself to introduce accrual IPSAS, with officials preparing analysis and an implementation plan. And the Zimbabwean government has said it wants…
GREAT PROFITS MAY BE WON IN FAILED AND FRAGILE STATES – BUT THE RISKS ARE HIGH
…company closures, political volatility and a proactive government policy favouring local black-Zimbabwean owned businesses. However, Kudakwashe Basikoro, a Harare accountant, said investors eyeing Zimbabwe’s financial sector a least should not…
WILDLIFE CRIME INCREASINGLY RUN BY INTERNATIONAL ORGANISED CRIMINAL NETWORKS
…rebels they are supposed to fight, providing weapons and support in exchange for ivory poached across central Africa; Zimbabwean political elites who seize wildlife spaces in their country that function…
CURING-BASED DEFORESTATION CONTINUES TO CONCERN ZIMBABWE TOBACCO SECTOR
…Union. Before the country’s land reform programme was fast-tracked in 1999, around 1,500 white Zimbabwean large-scale tobacco growers used forced air curing units to dry their tobacco leaves. These units…
SENIOR ZIMBABWE MEAT INDUSTRY FIGURES CALL FOR COSTS REDUCTIONS TO AID EXPORTS
The Zimbabwean government has been urged by a major domestic meat processor to take steps that will make local meat more price-competitive and attractive to external markets as it prepares…
ZIMBABWE PLANS MAJOR PUBLIC INVESTMENT IN BEEF LIVESTOCK SECTOR
…as there is shortage of grazing lands. Agriculture minister Joseph Made has stressed that there is strong export demand for Zimbabwean beef, in southern Africa and beyond. ENDS …
SUB-SAHARAN AFRICAN PERSONAL CARE MARKET GROWS AS WEALTH SPREADS
…report revealed that Zimbabwean manufacturing capacity utilisation was now 39.6%, so a resurgence of cosmetics manufacturing is not expected. The personal care product sector in sub-Saharan Africa’s newest country South…